အဟိ..! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » အဟိ..!	17
Posted by Kyi Lwin on Jan 21, 2016 in Creative Writing | 17 comments
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၇ ခုနှစ်၊ ပြာသို လဆန်း ၁၂ ရက် ၊ ကြာသာပတေးနေ့။
မန်းဂေဇက်ရွာသူကြီးနဲ့တကွ မိဘပြည်သူများခင်ဗျာ..အဲလေ .. ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ ကျန်းမာတော်မူကြရဲ့နော်။
မန်းဂေဇက်ရွာထဲ လှည့်ပတ် ဖတ်မိတော့ အတော့ကို ဗဟုသုတစုံပေတာပါပဲလား။
ရွာသူကြီးကလည်း အကွပ်အညှပ်ကောင်းထင်ရဲ့။ ရွာသူရွာသားများကလည်း ထထ ကြွကြွ ညီညီညွတ်ညွတ် ရှိကြပါပေရဲ့၊ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ။
တနေ့က အလည်တခေါက်လက်ဦးလှည့်မိတဲ့ တို့တစ်ယောက်တော့ တ၀ဲလည်လည်နဲ့ ပြန်မထွက်ဖြစ်တော့ပြန်ဘူး။ အများတကာရေးတာတွေဖတ်ပြီး သဘောကျရပါသကော..။
အဲ.. သဘောကျတယ်ဆိုမှ ဒီမနက်လည်း ဘတ်စ်ကားပေါ် တွေ့ခဲ့တာတစ်ခု သဘောကျပြီး ပြုံးစိစိ နဲ့ အဟိ..။
“ကားပေါ်တွင် အမှိုက် မပစ်ရ ”
ဒါဆို လမ်းပေါ်တော့ ပစ်လို့ရသပေါ့နော်။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားများလေ့လာလို့ကုန်နိုင်ဘွယ်ပါလား။ အများနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စည်းကမ်းကို နေရာသတ်မှတ်ခြင်းမလိုတဲ့အတွက် နေရာတိုင်းမှာ စည်းကမ်းရှိခြင်းဆိုတာကို ပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်
” စည်းကမ်းရှိပါ၊ အမှိုက်မပစ်ရ။”
ဒါလောက်ဆို အများကို သတိပေးစာအနေနဲ့ လုံလောက်ထင်ရှားမှာပါ။
ခုတော့..ကားပေါ်တွင်အမှိုက်မပစ်ရ ဆိုတော့ လမ်းပေါ်တော့ ပစ်လို့ ရတာပေါ့နော်.. အဟိ။
နောက်တခုမှတ်မိသေးတယ်။ ဂျာနယ်တခုက သတင်းခေါင်းစဉ် တပ်ထားတာလေး။
ဟိုလေ…သမ္မတကြီးရဲ့ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် မီးလောင်သွားသော ဈေးကြီးအား…….ဆိုပြီး။
သြော် သြော … မီးလောင်အောင် သမ္မတကြီးက လမ်းညွှန်ခဲ့တာကိုး….ဟီဟိ။
တို့များကို လာလည်ပြန်တော့လည်း မျက်စိနောက်လောက်ပါလားလို့ စိတ်ဆိုးတော်မူကြနဲ့။
သူကြီးနဲ့တကွ ရွာသူ ရွာသားအပေါင်း ကျန်းမာရွှင်လန်းစေကြောင်းရှင်။
အောင် မိုးသူ says: အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါတဲ့
မြန်မာမှာလည်း သဒ္ဒါကို သေချာမသိတဲ့သူတွေ တယ်များပါသကား။
HMM says: သဒ္ဒါမတ်တ စာမတ်တ လို့ဆိုသကော..
ရေးတဲ့သူက ရေးပြီးပြီးသွားပေမယ့် ဖတ်ရတဲ့သူမှာ ခိုးလိုးခုလု မတင်မကျနဲ့ တွေးမပြီးတော့ဘူး
ဟော.. ခုလဲကြည့် တွေးမပြီးလို့ ပို့စ်တစ်ခုတက်လာပကော
ပြောသာပြောတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲ တခါတလေ စာမေ့သတော့ ခလိ :k
alinsett says: လှိုင်သာယာဘက်မှာ တွေ့ဖူးတာတစ်ခုဆိုရင်…
မုတ်ကြိတ်သည် တဲ့… ။ စကားပြေတောင် ဖြောင့်အောင်မရေးတတ်ဘဲ… စာအုပ်ရေးထုတ်နေတာတွေတောင် ရှိနေတဲ့ခေတ် ဆိုတော့.. ဆိုတော့… အများမိုးခါးရေ သောက်ရင်…လိုက်သောက်ရုံပေါ့…လို့… (အတော်များများတွေးကြသလို) မတွေးဘဲ ဘယ်သူမှားမှား.. ကိုယ်မမှားအောင် ပြင်ဆင်တတ်တဲ့အတွေးနဲ့… မြန်မာစာ/သဒ္ဒါကို ကယ်တင်ရမယ်ထင့်… ——————–
စနစ်တကျ ဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့ ပညာရေးက စပြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့…
မကြာခင်တက်လာမယ့် ”အမေအစိုးရ”လက်ထက်မှာတော့…ပညာရေးလည်း စမတ်ကျလာမယ်ထင့်…
naywoon ni says: အဲ့ ဟိုဆိုင်းဘုတ်​​လေးကျ​တော့ ဘာ​ပြောမလဲ အလက်​ဆင်းရဲ့
” စက်​ဘီး / ဆိုင်​ကယ်​ ဖာသည်​ ။ ” တဲ့ အာဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
သင့်အရိပ် says: အဲ့ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတဲ့သူကို မေးလိုက်လေ…
အသစ်ကလေးတွေကော.. ရှိလား..လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1292
uncle gyi says: မြန်မာစာကိုသဒါကောင်းကောင်းမသင်ခဲ့ကြရတော့အဲလိုဖြစ်နေကြတာ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 132
Kyi Lwin says: အစိုးရပိုင်သတင်းစာတွေလည်း ဖြစ်ပါ့။ ဂျာနယ်တွေမှာရောပဲ အမြှီးအမောက် မတည့်တွေ။
kai says: အင်း.. ကျုပ်ကို စောင်းပြီး တည့်တည့်ပြောနေကြတာလားမသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 132
Kyi Lwin says: အဲလိုလည်း မဆိုလိုပါ..ဒါပေမယ့် မှန်သွားတော့လည်း ..မတတ်နိုင်..အဟိ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ကြည်လွင် မြည်ရွှင် စည်ပင် တီထွင်
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အဟိ ငပိ အစိ ကလိ မသိ ဂတိ
Kyi Lwin says: မြည်သံစွဲ အလင်္ကာမြောက်ပါပေတယ်။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .နောက်ရှိပါသေး…ဆုပေးပွဲမှာ အခမ်းအနားမှုးက“ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအားဆုချီးမြှင့်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်”တဲ့..အဟိ
.ကျောင်းအုပ်ကြီးပဲဆုရသလို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: မြန်မာသဒ္ဒါမှာ အထားအသို သင်ခဲ့ရတဲ့ ကျေးဇူးက အင်မတန်များပါတယ်။
ဘာမှအရေးမကြီးဘူးလို့ ထင်ပြီး သင်ယူခဲ့တဲ့ ရုံးစာရေးနည်းတို့၊ လိုတိုရှင်းတို့ဆိုလည်း တကယ်စာရေးတဲ့အခါ တကယ်အသုံးကျပြီး အကျိုးများပါတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14410
kai says: ကမ္ဘာတန်းအဆင့်လောက် အရှုပ်ထွေးဆုံး.. ဘာသာစကားတခုဗျ..။ အူကြောင်ကြောင်တွေ တော်တော်များ..
တိဘက်တို-ဘားမန်းကနေ.. စကားကို ယူတယ်..။
စာအက္ခရာကို အိန္ဒိယက ယူတယ်..။
အဲဒါ.. မြန်မာစာ/စကား… တဲ့..။
ခဏနေ.. ဆရာစွမ်းဆောင်းပါးတင်ပေးမယ်..။ ဖတ်ကြည့်….။
Kyi Lwin says: Kai ရေ တင်ပေးလိုက်ပါ ။ ကျေးဇူးများမှာပါ။ မြန်မာစာ မြန်မာစကားကို အဓိပ္ပါယ်အလွဲတွေမသုံးဖို့၊ ပျက်စီးမှုတွေပါမလာဖို့ ၊ ဖျက်ဆီးမှုတွေ နည်းပါးဖို့ မြန်မာစာပေအရေးအသားကို စိတ်ဝင်စားမြတ်နိုးသူတိုင်း တာဝန်တခုအနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကြတာပေါ့။
အဂ္ဂမဟာ ပြောင်ကြီး says: ​တွေ့ဖူး​သေးတယ်​
ဘာတဲ့ ၊၊၊၊ ​ဘောလုံးကွင်းတွင်​ ​ဘောလုံးကန်​ခွင့်​ မပြု တဲ့
​ပြောင်​ကြီး မှ ​ပြောင်​သလား မှတ်​တယ်​
​​ပြောင်​ကြီး​လောက်​နီးနီး ​ပြောင်​တဲ့လူ​တွေလည်း အပုံကြီးပဲ